मिर्गौलाका बिरामीले दशैंमा के खाने, के नखाने ?
विराटनगर १९ असोज । दशैंको सयममा नेपालीहरुले हरेक पटकको खानेकुरा तथा खाजापनि मासुकै परिकार नै हुने गर्छ । दसैंमा विहान, दिउँसो तथा बेलुका मासुभात, मासुचिउरा तथा मासुका अनेक परिकारसँगै मसलेदार र अधिक चिल्लोपना भएका खानेकुरा बढि खाइने गरिन्छ । चाडपर्वमा खानेकुरामा लापरवाही गर्नुका साथै अत्यधिक मदिरा पनि पिउने गरिन्छ । मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. शक्ति बस्नेतका अनुसार बढी चिल्लो खानेकुरा र मदिराको अत्यधिक सेवनका कारण मिर्गौला असन्तुलन हुन गई मिर्गौला फेल समेत हुन सक्छ । त्यसकारण मिर्गौला रोग लागिसकेकाले चाडपर्वको नाममा अत्यधिक चिल्लो मसलेदार खानेकुरा मासु र रक्सीलाई छुनु समेत हुँदैन ।
यसका साथै स्वास्थ्य सामान्य भएकाहरूले पनि चाडवाडको समयमा मदिरा र खानपिनमा ध्यान नदिँदा मिर्गौलाले गर्ने नियमित क्रियाकलापमा सन्तुलन गर्ने प्रक्रियामा असर पर्न गइ मृगौलामा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । डा. बस्नेतका अनुसार मिर्गौलामा असन्तुलन हुनुको मुख्य कारण भनेको अत्यधिक मात्रामा रक्सीको सेवन गर्नु हो ।
मदिराजन्य पदार्थमध्ये वियर र वाइनमा अल्कोहलको मात्रा कम हुन्छ भने रम, जिन, भोड्का, ब्राण्डी, हृविस्की आदिमा अल्कोहलको मात्रा बढी हुन्छ । रक्सीको सेवनले शरीरमा पानीको मात्रालाई घटाएर, रगत बग्ने नलीलाई फुलाएर तातो रगत बगाउने, पसिना समेत आउने हुदा शरीरमा डिहाइड्रेसन हुन सक्छ । तर, वियरले भने शरीरको मेटाबोलिजममा उल्टो असर गर्छ ।
वियर खाँदा शरीरमा पानीको मात्रा बढ्न गइ पटक पटक पिसाब लाग्ने समस्या हुने अवस्था आउन सक्छ । जति मात्रामा वियरको सेवन गर्यो त्यति नै मात्रामा शरीरमा बाहिर नगएको खण्डमा शरीरमा पानीको मात्रा बढ्न गई मिर्गौलालाई नकारात्मक असर गर्छ । खाली पेटमा रक्सी पिउनु झनै हानिकारक हुने गर्छ । रक्सी पेटमा पुगेपछि सोसिएर रगतमा मिसिन्छ र बग्दै शरीरको अन्य भागमा पुग्छ ।
मृगौलाको समस्या भएको शङ्का भएमा शरीरमा रक्तचाप र शरीरमा चिनीको मात्रालाई सन्तुलनमा राख्नु पर्छ । मधुमेहको औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिहरुले रक्सी सेवन गरेमा मिर्गौला फेल हुने सम्भावना हुने उनको भनाई छ । ४० वर्ष कटेका व्यक्तिहरलाई मृगौलाको समस्याले छिट्टै च्याप्ने हुदा खानपान तथा रक्सीको सेवनमा एकदम ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ नत्र दशैं दशामा परिणत हुन धेरै समय भने लाग्दैन ।